ပြင်ပမြို့ရိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
အဟောင်းအဆောက်အဦးကိုလည်းကြိမ်နှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်စေဖို့ဘယ်လိုဟောငျးတိုက်ခန်းပြင်ဆင်မှုဟောင်းနွမ်းတိုက်ခန်းအပြင်ပန်းပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေး, "အဟောင်းတိုက်ခန်းများပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပန်းချီ" ဟုအတော်လေးအဆင်ပြေပြေနဲ့အကျိုးရှိစွာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ပို. ပို. ဟောင်းအဆောက်အဦမြို့ပြအဆောက်အဦအာကာသကယ်တင်တော်မူ၏, ဒါပေမယ့်လည်းအသစ်တစ်ခုကိုကြည့်နှင့်အတူတက်ကြွတည်ဆောက်ခြင်း revitalizes မသာသော "အဟောင်းတိုက်ခန်းများ၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခေတ်" ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အမြင်တစ်ခုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အနေဖြင့်ထိုသို့ tile ကို၏အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုရှေးဟောင်းသုတေသနရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါဟာနိပွန် Paint ထက်ပိုသုံးကြိမ်စျေးနှုန်းကုန်ကျသည်။
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်အပြင်မြို့ရိုးအများ၏အရည်အသွေးသေချာစေရန်အလို့ငှာ, မည်သည့်ပြင်ပမြို့ရိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအောက်ခြေအဆင့်အထိထံမှလုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အဟောင်းသောမြို့ရိုးမျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်းပြဿနာသည်မြို့ရိုးမျက်နှာပြင်ပြုပြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးမြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်များအတွက်စံလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ အတွက်ကြွေကြွေပြားမြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေး၏ယေဘုယျအားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ Taiwan အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သောင်းချီကြွေပစ္စည်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏၏, တခြားမြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်များအနေဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခက်အခဲအတွက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာဟောင်းကိုတိုက်ခန်းများအများစုမှာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံနေကြသည်နှင့်ပြင်မြို့ရိုးကိုအရင်ထွက်ခေါက်နေကြသည်။ ပြင်ပမြို့ရိုးကိုကြွပ်, ဆောက်လုပ်ရေးအလွန်အချိန်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, ထို RC အဆင့်ကိုဝင်တိုက်, ပြီးတော့အလုပ်ပြန်လည်ပြုပြင်; ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်စတုရန်းမီတာလျှင် 5,6 တထောင်ယွမ်ကနေသောင်းချီယွမ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏အထိရွေးချယ်ထားသောအဆောက်အဦးပစ္စည်းများနှင့်အတူအညီများမှာအများစုမကြာခဏဒါဟာအစတစ် tiled အပြင်မြို့ရိုးကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖန်ကုလားကာသည်မြို့ရိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရိုးရာအဟောင်းတိုက်ခန်းများ၏အပြင်ပန်းရိုးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအချိန်ကုန်, အလုပ်သမား-intensive ဖြစ်တယ်, မြို့ရိုးကိုဖျက်ဆီး။ ဒါဟာမကြာခဏဆူညံသံ, စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ သင်အချိန်နှင့်ငွေကိုကယ်တင်ဥရောပ, အမေရိကနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများတွင်အဆင့်မြင့်နိုင်ငံများလေ့လာနေစဉ်းစားရန်လိုပေမည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှေးဟောင်းသုတေသနမှလှပပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတအပြင်ပန်းဆေးသုတ်